'नागरिकताका लागि आमाकै घोषणा काफी' – देशसञ्चार
२०७६ जेष्ठ ६, सोमवार
नागरिकता विधेयकबारे रेखा शर्मासँगको कुराकानी
‘नागरिकताका लागि आमाकै घोषणा काफी’
प्रकाश ढकाल फाल्गुन २४, २०७५
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सात महिनादेखि छलफल चलिरहेको छ । एउटै विधेयकमाथि यति लामो समयसम्म छलफल भएको संभवत पहिलोपटक हो । लामो छलफलबाट पनि समितिले विधेयकका कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान नभएको पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै समितिले आमाको स्वघोषणाबाटै सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न सहमति जुटाएको छ । जसप्रति समितिकै कतिपय पुरुष सांसदले असहमति व्यक्त गरिरहेका छन् । विधेयकमा अझै विवाहित अंगकृत, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज, विदेशीसँग विवाह गरेर जन्मेका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिनुपर्नेलगायतका केही विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ ।
नागरिकता विधेकका यिनै विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्मासँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयकलाई टुंगो लगाउन राज्य व्यवस्था समितिलाई हम्मेहम्मे परेको हो ?
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको कुरा ठिकै हो । अरु विधेयकभन्दा नागरिकता विधेयक फरक छ । यो संवेदनशील कानुन भएकाले ध्यान पूर्वक, होसियारी पूर्वक टुंग्याउनु पर्नेछ । यो विधेयक राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको छ ।
अर्कोतर्फ कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसकारण गम्भीर, संवेदनशील र सबैको सहमतिमै टुंग्याउनु पर्ने भएकाले केही बढी समय लागेको हो ।
अर्कोतर्फ संविधानले भनेअनुसार फागुन २१ भित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने कतिपय विषयका कारण पनि यसमा ध्यान कम गएको थियो । कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि टुंग्याउनु पर्ने अवस्था थियो । नगरी नहुने कामलाई पहिले गर्नुपर्दा नागरिकता संशोधन विधेयकमा केही ढिलाइ भएकै हो ।
संसदको जारी अधिवेशनबाटै पारित होला ?
जारी अधिवेशन चैतको पहिलो हप्तासम्म चल्यो भने यसैबाट पारित हुन्छ नभए अर्को अधिवेशनमा यसलाई पारित गर्छौँ । विधेयकका धेरै विषयलाई टुंग्याइ सकेका छौँ । अब केही विषयमा मात्र बाँकी छन् । हाम्रो प्रयास जारी अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल नभएर पनि विधेयकलाई टुंग्याउन समय लागेको हो कि ? यो विधेयक राष्ट्रियता र राजनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडिएको हुँदा नेतृत्व तहबाटै सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ ?
त्यहाँसम्म हामी अझै पुगिसकेका छैनौँ । समितिमा हामीले तत्काल मिलाउन सकिने विषयलाई मिलाउने र जटिल विषयमा छलफल गर्दै जाने नीतिअनुसार अघि बढेका छौं । पहिलो चरणमा गरिएको छलफलबाट धेरै विषय टुंगिएको छ ।
अहिले गृह, कानुन मन्त्रालयको समेत सहभागितामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएर छलफल गरिरहेका छौँ । समितिले मिलाउन सकेन भने कतिपय विषय राजनीतिक तहबाट मिलाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म हामीलाई के विश्वास छ भने समितिबाटै यसलाई मिलाउन सक्छौँ ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषयमा समितिभित्र र बाहिर सबैभन्दा बढि छलफल भएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था समिति आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु नभएको पुष्ट्याइ गर्नु नपर्ने प्रावधान राख्न सहमति हुनुभएको हो ?
बाबुको पहिचान नभएको वा बाबुले नागरिकता बनाइ दिन अस्वीकार गरेको खण्डमा आमाले गरेको घोषणालाई स्वीकार गर्ने कि त्यसको पनि पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल भएको छ । लामो छलफलपछि हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने, आमाले गरेको घोषणालाई नै मान्यता दिएर सन्तानलाई नागरिकता दिने । विभिन्न कारणले बाबुको पहिचान हुन सक्दैन ।
सामूहिक बलात्कारबाट जन्मेको अवस्थामा, टेष्टयुब वेवी जन्माएको अवस्थामा र अर्को विभिन्न सामाजिक कारणले बाबुले अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छ । पितृसत्तात्मक सोचका कारण बाबुले आफ्नो सन्तान अस्वीकार गरे पनि आमाले गर्न मिल्दैन । आमा सत्य हो जहिले पनि स्थापित हुन्छ ।
विभिन्न कारणले बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो । तर, संविधानअनुसार पनि त्यो कुरा मिल्दैन ।
संविधानले बाबु नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने वा पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । हामीले यो कुरा व्यवाहारिक रुपमा पनि जटिल हुन्छ । बाबु नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिला एकपटक मात्र होइन पटक पटक हिंसाबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
आमाले आफ्नो सन्तान हो भनिसकेपछि उनैको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । यो प्रावधान राख्दा संविधानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन सकिने भन्ने भावनालाई पनि समेट्न सक्छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने तर त्यसलाई हरेक ठाउँबाट कसेर लिनै नसक्ने बनाउनु हुन्न ।
ढड्डामा बाबुको पहिचान नभएको रेकर्ड राखेर आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राख्न गृहमन्त्रालय पनि सहमत भएको छ ।
आमाले भनेकै भरमा नागरिकता दिने व्यवस्था राख्ने सहमति गरिरहँदा विदेशमा गएर नेपाली महिलाले जन्माएका सन्ताले पनि वंशजकै नागरिकता पाउने बाटो खुल्छ, जुन देशको हितमा छैन भन्ने बहस पनि समितिभित्रैबाट उठिरहेको छ नि ?
त्यो चाहिँ आमाले ढाँटेको अवस्थामा हो । विदेशमा गर्भ बोकेर आएको महिलाले जन्माएका सन्तानलाई पनि वंशजकै दिन हुन्न भन्ने विषय ठिकै होला । तर, त्यो आमाले ढाँटेको सन्दर्भमा भयो ।
नागरिकता नपाउनु पर्ने धेरैले नागरिकता पाएको हुन्छ, मेरो छोरो हो भनेर ढाँटेर पनि नागरिकता दिएको अवस्था पनि हुन्छ । ज्वाइलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिएको अवस्था पनि हाम्रोमा छ ।
यस्ता विषयलाई नागरिकता सम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गर्ने होइन, त्यसका लागि अर्को कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आमाले ढाँटेर विदेशी बाबुबाट जन्मेकोले वंशजको नागरिकता पाएको भए त्यो अंगकृतमा परिणत हुने व्यवस्था त हाम्रो कानुनमा छ ।
अर्कोतर्फ स्वघोषणा झुठा ठहरिए आमालाई सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै पुरुषले मेरो सन्तान हो भनेर नागरिकता दिएको पनि हुनसक्छ तर त्यसो भन्दैमा हामी बाबुको नामबाट नागरिकता नदेउ भन्न सक्दैनौं ।
विदेशीसँग नेपाली महिलाले विवाह गरेर जन्मेको सन्तानले अंगकृत नागरिकता पाउँछन्, त्यसलाई वंशज बनाउनु पर्‍यो भन्ने छलफल पनि उठिरहेको छ, यो जायज हो र ?
यो छलफल मैंले सुनेको छैन । किनभने हाम्रो संविधानले प्रष्ट भनेको छ, वंशजनको नागरिकता पाउन आमा बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने भनेर । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तान अंगकृत हुने भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
त्यो कुरासँग हामी को कित सहमत छौं त्यो अर्को कुरा भयो । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अहिले हामीले चलाउन सक्दैनौँ । तर संविधानमा भएका प्रगतिशिल व्यवस्थामा टेकेर समानता कसरी कायम गर्न सक्छौं भन्नेतर्फ विचार गर्छौ ।
तर, विदेशीसँग विवाह गर्ने पुरुषको सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने बहस चाहिँ पक्कै हो । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तालाई पनि वंशजको नागरिकता दिनेबारे बाहिर धेरै प्रपोगाण्डा भइरहेको छ । यसबारे समितिमा कुनै छलफल भएको छैन ।
वैवाहिक अंगकृतको विषयमा कुनै प्रगति भयो ?
छैन । वैवाहिक अंगकृतको बारेमा थप छलफल गर्ने भनेर छाडेका छौं । यसमा दुई तीनवटा कुरा छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेकमा तुरुन्तै संघीय कानुन बमोजिम अंगकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय हाम्रा सामु छ । एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता गर्ने कि ? जुन गरिरहेका छौं । वा विवाह गरेर आउने महिलाको सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नागरिकतालाई अछि दिने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । किनभने नागरिकता भनेको राजनीतिक अधिकारको विषय पनि हो ।
यसमा के के विकल्पहरु होलान् ? जस्तो भारतमा विवाह गरेर विदेशबाट जाने महिलाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउँछन्, हाम्रोमा पनि त्यस्तै कुनै निश्चित वर्ष राख्ने कि भन्नेबारे पनि आवाज उठेको पाइन्छ ?
यसमा विभिन्न कोणबाट तर्कहरु आइरहेका छन् । कसैले तीन वर्ष गरौँ भन्नेछ, कसैको १० वर्ष गरौं भन्नेछ, कसैको गर्न हुँदैन तुरुन्तै पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । सामाजिक सुरक्षा र धेरै अधिकारहरु नागरिकतासँग जोडिएका छन् ।
अर्कोतर्फ हाम्रा चेलिबेटीहरु विवाह गरेर बाहिर गएको अवस्थामा तुरुन्त नागरिकता पाउँदैनन्, हामीले चाहिँ आउँदा आउँदै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसलाई अर्को ढंगले व्यवस्थापन गरौँ भन्ने पनि छ ।
भारतमा सात वर्ष भए पनि अरु कतिपय देशमा बच्चा जन्मेर उसले पाइसक्दासमेत आमाले पाएको हुँदैन । हामी धेरै छलफलमा छौं कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्छौँ । निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय हितलगायत सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै विवाह गरेर आउने महिलालाई सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन ।
यसमा समितिले निर्णय गरिसकेको छैन । तर, मनस्थिति चाहिँ सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक अधिकारलाई केहीपछि दिने गरी कानुनलाई निष्कर्षमा पुयाउँछौं । नागरिकताको खुला आह्वान गर्ने देशले पनि तुरुन्तै राजनीतिक अधिकार देखिएको पाईँदैन । हामीले भारतमै हेरौं भने पनि सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री किन बन्न सकिनन् त ?
जन्मसिद्धका सन्तान वंशज हुन्छन् भनेर संविधानले किटान गरेको अवस्था छ । तर त्यसलाई पनि अलि कडाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल विचार विमर्श भइरहेको देखिन्छ नि ?
संविधानले नागरिकताका विषयका धेरै कुरा प्रष्ट पारे पनि कतिपय विषय संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेर पनि उल्लेख भएको छ । संविधानभन्दा विपरीत जान त कानुन मिल्दैन । तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन भने अवश्य सकिन्छ ।
तर, जन्मसिद्धका सन्तानलाई सजिलै वंशजको नागरिकता दिने र भोलि तिनै राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुगे भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्टिय अखण्डतामै असर पो पर्ने हा कि ?
यसमा धेरै कुरा जोडिएका छन् । अहिले जन्मसिद्धको नागरिकतालाई हामीले मुख्य दशवटा पदमा मात्र रोक्न सकेका छौँ । त्यो भन्दा बढी गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अलि गम्भीरता पूर्वक नै सोच्नुपर्छ ।
तर, बाहिर आएका कतिपय कुरा गृह मन्त्रालयको तथ्यांकबाट होइन रहेछ भन्ने प्रष्ट पनि भयो । राज्यले पहिचान गरिसकको विषयमा त्यति धेरै माथापच्ची गर्न आवश्यक छैन ।
फाल्गुन २४, २०७५ मा प्रकाशित
आशलाग्दो सांसद आशाकुमारी
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको इतिहास